सूर्यग्रहणको असर : कुन राशीलाई के हुन्छ ? – Saurahaonline.com
सूर्यग्रहणको असर : कुन राशीलाई के हुन्छ ?
सौराहा अनलाइन | २०७७, ७ असार आईतवार
काठमाडौं । आज बिहान १०ः५० बजेदेखि सूर्यग्रहण लाग्दैछ । सूर्यग्रहण अपरान्ह १२ः३८ मा मध्य भइ दिउँसो ०२ः२३ मा छोड्नेछ । सूर्यग्रहणको अवधि ३ घण्टा ३३ मिनेट रहने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
पृथ्वी र चन्द्रमाले सूर्यको परिक्रमा गर्दा तीनै पिण्ड सीधा रेखामा परेका बेला माझमा पर्ने चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाश छेकिंदिँदा पृथ्वीबाट सूर्यमा देखिने छायाँ नै सूर्यग्रहण हो । ग्रहण लाग्दा त्यसले प्राणी, बनूपति र जगतमा विभिन्न असरपर्ने ज्योतिषशास्त्रीको भनाई छ । ज्योतिषशास्त्री अनुसार यसले मानिसको जीवनमा समेत विभिन्न असर पार्छ ।
खण्डग्रास यो सूग्रहणको असर राशी अनुसार फरकफरक रहने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँन्छन् । ज्योतिषशास्त्री अनुसार आज लाग्ने सूर्यग्रहण मेष, सिंह, कन्या र मकर राशीका हरुका लागि राम्रो छ । वृष, मिथुन, कर्कट, तुला, वृश्चिक, धनु, कुम्भ र मीन राशीलाई अशुभ रहेको छ । मेष राशिका व्यक्तिलाई श्रीप्राप्ति, सिंह राशीका व्यक्तिलाई लाभ हुने, कन्यालाई सुख र मकर राशीलाई पनि सुख रहेकोे ज्योतिषशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
मृगशिरा नक्षत्र, आद्र्रा नक्षत्र र मिथुन राशीका व्यक्तिहरूले ग्रहण अवलोकन गरेमा अति कष्ट हुनेछ । ज्योतिषशास्त्रले राशिफलका आधारमा ग्रहण हेर्न हुने र नहुने बताए पनि खगोल विज्ञानले यसलाई अवैज्ञानिक तर्कका रूपमा लिँदै सुरक्षित लेन्सको प्रयोगले ग्रहण हेर्न सकिने जनाएकाे छ ।
सूर्यग्रहणले कुन राशीलाई के हुन्छ
मेष– धन लाभ
वृष– नोक्सानी हुने
मिथुन– मित्रबाट धोका हुने
कर्कट– आर्थिक व्यय
सिंह– लाभ हुने
कन्या– सुखदायी यात्रा
तुला– मान प्रतिष्ठामा कमी
वृश्चिक– शारीरिक कष्ट हुने
धनु– विपरीत लिङ्गीबाट पीडा हुने
मकर– गृह सुख मिल्ने
कुम्भ– मन अस्थिर हुने
मीन– मनमा शंका बढ्ने